Hanafoana ny fanamelohana ho faty ve ny fifidianana filoham-pirenena Taiwaney manaraka? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Janoary 2021 9:55 GMT
Taratasy mivalona avy amin'ny ”Taiwan Aliance” mba hampitsaharana ny fanamelohana ho faty, mitaky ny fanafoanana ny fanamelohana ho faty, amin'ny teny ny sinoa sy anglisy. Saripikan'i Filip Noubel, nahazoana alàlana.
Na dia nekena ho fahatelo amin'ny firoboroboan'ny demokratia any Azia aza i Taiwan dia mbola mitàna ny fanamelohana ho faty ihany. Raha jerena ivelany, dia ohatra ny misy marimaritra iraisana momba ilay olana : taiwaney 85 isan-jato no manaiky izany raha ny fiverimberin'ny hevitry ny olona. Nefa, mpikatroka vitsivitsy no mihevitra fa tonga ny fotoana handinihana ny olana mikasika ilay sazy faratampony, indrindra amin'izao fotoana ifantohan'ny nosy amin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena amin'ny volana Janoary 2020 izao.
Maneran-tany, efa firenena 100 mahery no nanafoana ny fanamelohana ho faty satria heverina ho toy ny tena fanitsakitsahana ny zon'olombelona izany. Any Azia atsinanana, didy ny fanamelohana ho faty fa tsy tranga manokana : tamin'ny 2016 i Mongolia no nanafoana izany, nialohavan'i Macao tamin'ny 1976 sy i Hong Kong tamin'ny 1993; mbola mampihatra izany kosa ireo firenena hafa rehetra toa an'i Shina izay an'arivony isan-taona ireo olona voaheloka.
Tamin'ny andro nitondran'ny Japoney ilay nosy (1895-1945) no nampidirana ny fanamelohana ho faty tany. Rehefa nitady fialokalofana tany amin'ny tanibe Shina ny Kuomintang tamin'ny 1945 ary nandray ny fifehezana ny fanjakana tao amin'ny nosy, dia voatàna ny fanamelohana ho faty. Hatramin'izao, dia ampiasàna fampatoriana ny fanatanterahana ny famonoana ho faty, tifirina ao amin'ny lamosiny ilay voaheloka raha iny mitsotra eo ambony kidoro iny.
Ireo heloka bevava toy ny fivadiham-pitokisana, ny fitsikilovana, ny famonoana olona na ny fanolànana no ampiharana ny fanamelohana ho faty. Raha manodidina ny 50 ka hatramin'ny 70 isantaona matetika ny isan'ireo novonoina hatramin'ny fiandohan'ny taona 1990, dia nihena eo ho eo amin'ny 5 isanjato isantaona izany nanomboka tamin'ny 2000.
Raha ohatra ka isan'ireo ambany indrindra maneran-tany ny tahan'ny heloka bevava any Taiwan, nahoana ny vahoaka ao Taiwan no tena mankasitraka ilay sazy faratampony? Mino i Lin Hsinyi, ilay mpikatroka efa ela amin'ny fanoherana ny fanamelohana ho faty ary mpitarika ny Fikambanana taiwaney manohana ny fanafoanana ny fanamelohana ho faty (廢除死刑推動聯盟) sady miara-miasa amin'ireo voafonja voaheloka ho faty taloha, fa iray amin'ireo antony ireo ny tsy fanànan'ny olona finiavana hanohitra ireo fitsipika misy :
Efa zatra manaiky ny toe-draharaha misy ny vahoaka taiwaney, tsy mila mandany fotoana hisainana lalina ny zava-misy mba handinihana na marina na tsia ry zareo. Manana ny andraikiny eto ny fomba fijery nenti-paharazana, ohatra, ilay hevitra hoe ” raha mamono olona ianao dia tsy maintsy manefa amin'ny ainao “. Fa heveriko fa ny tena olana dia ny tsy fahampian'ny famakafakantsika ny fanontaniana iray : Satria ve misy ny zavatra iray dia marina izy izany ? Tena mankato ny fitsipiky ny governemanta ny vahoaka taiwaney. Ekena fa misy ny trangam-pahadisoam-pitsaràna, nefa mety tsy ho fantatry ny ankamaroan'ny olona izany.
Ao anatin'ny ezaka hanovàna ny fitsipika dia niara-niasa tamin'ny rafitry ny governemanta sy ny mpikaroka ny fikambanana taiwaney miady ho amin'ny hanafoanana ny fanamelohana ho faty (TAEDP) mba hamariparitana ilay olana amin'ny fomba tsotsotra kokoa ankoatry ny hoe “mpomba sa mpanohitra” an'ilay sazy faratampony. Ny valin'ireo andiam-panontaniana tamin'ny taona 2013-2014, izay misy fanontaniana maherin'ny 100 ary napetraka tamin'ny olona 2.000 dia naneho fa tsy mafy orina araka izay isehoany ivelany ny fomba fijerin'ny olona. Manazava i Lin Hsinyi :
Raha manontany olona momba ireo trangana fahadisoam-pitsaràna ianao dia tsy mankasitraka ny fanamelohana ho faty ry zareo, noho izany dia tsy mifototra amin'ny fisainana tsy miangatra ny fanohanana ilay sazy faratampony. Zavatra tena nahaliana no nataonay, nozarainay ho andiany A sy B ny fanontaniana. Tamin'ny fanombohan'ny andiam-panontaniana A no nametrahanay ny hoe : tohananao ve ny fanamelohana ho faty sa tsia ? fa tany amin'ny farany kosa no nisy io fanontaniana io tao ao amin'ny B. Tsikaritray fa raha maka fotoana hisaintsainana ny momba izany ny vahoaka, dia ho ny 82 isan-jaton'ny valom-panontaniana ihany no mankasitraka ny fanamelohana ho faty, nefa tamin'ny nametrahana ny fanontaniana tany am-boalohany dia 88 isan-jato ny tahan'ny mankasitraka. Misy elanelany 6 isan-jato. Mampiseho izany fa elanelam-potoana 15 minitra dia ampy hanovàna fomba fisainana. Raha toa ka manome torohay mismisy kokoa isika, raha toa ka tezaintsika ny vahoaka, azo antoka fa hiova ny fomba fijery.
Araka izany, rehefa omena fahafahana hisafidy ry zareo, ny ankamaroan'ny olona dia tsy mifidy ny fanamelohana ho faty. Matetika ny governemanta no miteny hoe “Ampiharinay ny fanamelohana ho faty satria ankasitrahan'ny vahoaka”. Fa diso izany raha ny fijeriko. Raha ianao no governemanta , tsy tokony ho ny fanazavàna ve no andraikitrao, mba hanome vahaolana ? Tsy ny fijerin'ny olona no sakana lehibe indrindra amin'ny fanafoanana ny fanamelohana ho faty fa ny tsy fahatontosan'ny governemanta ny andraikiny, na [governemanta] DDP izany na KMT.
Tena zava-dehibe tamin'ny asan'i Lin Hsi-yi sy ny fikambanana karakarainy ny famerenana indray ireo gadra voaheloka ho faty izay nafahana taorian'ny niaiken'ny fanjakana fa nisy ny fahadisoam-pitsaràna. Araka ny fanazavany :
1.000 ka hatramin'ny 5.000 dolara taiwaney isanandro [ 32 ka hatramin'ny 160 dolara amerikana ] isaky ny andro lany tao amin'ny fonja no onitra omen'ny governemanta. Fa talohan'ny nahitan-dry zareo ONG hanampy dia tsy maintsy ry zareo tsirairay avy no nandoa ny volan'ny mpisolovava, tsy maintsy miahy azy ireo ny fianakavian-dry zareo ary tsy mahazo mandeha miasa, ka vantany vao mnahazo ny onitra ry zareo dia tsy maintsy mamerina ny volan'ny fianakaviany ary mampiasa haingana ny vola rehetra.
Raha miasa any amin'ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana miady ny hanafoanana ny fanamelohana ho faty ireo gadra taloha sasany, ny hafa kosa dia mifidy ny hanao asa tànana mba handreseny ireo ratram-pony. Iray amin'ireny i Cheng Hsin-tze izay nampangaina ho namono manamboninahitry ny pôlisy. Nigadra 16 taona tany am-ponja tany Taiwan izy, 12 taona tamin'izany dia tao amin'ny toerana natokana ho an'ny olona voaheloka ho faty. Amin'izao fotoana izao dia mamboly sy mivarotra vary biôlôjika izy.
Vary biôlôjika vokarin'i Cheng Hsin-tse, ilay voaheloka ho faty taloha. Sary avy amin'i Filip Noubel, nahazoana alàlana.
Ny sasany kosa dia lasa mpitondra tenin'ny fanentanana ho amin'ny fanafoanana ny fanamelohana ho faty. Nasehon'ilay mpanakanto Christophe Meireis tao amin'ny asany, tamin'ny fampirantiana sary vao nosokafana vao haingana tany Taipei, ny fiainan'ireo voafonja sy ny havany. Nanatrika io fampirantiana io i Hsu Tzu-chiang.
Hsu Tzu-chiang miteny tamin'ny fanokafana ny fampirantiana sarin'ireo mpifonja miandry fahafatesana tao Taipei ny 15 Novambra 2019. Aseho ihany koa ny sariny manokana miaraka amin'ireto teny manaraka ireto: “Tsy manana nofy aho. Ny faniriko fotsiny dia Enga anie mba tsy hisy Hsu Tzu-chiang hafa.”Saripikan'i Filip Noubel, nahazoana alàlana.
Voateny foana amin'ny kabary imasom-bahoaka ny fanamelohana ho faty rehefa fotoam-pifidianana any Taiwan. Tamin'ny 2000, nisy fiovana ara-politika goavana tao amin'ny nosy satrian niaraka tamin'ny nahalany ny Filohan'ny DPP Chen Shui-bian , nofaranan'ny Antoko Demokratika Liam-pandrosoana (DPP) ny 55 taona nanjakazakan'ny Kuomintang. Nanomboka teo, dia nanjary fitaovana fampiasa amin'ny fotoam-pifidianana io olana io hisarihan'ireo antoko mpifaninana ireo mpifidy sy hisehoany fa mafy izy amin'ny resaka filaminana. Na teo aza ny zava-nisy hoe tamin'ny taona 2009 dia nosoniavin'i Taiwan teo anivon'ny Firenena Mikambana ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zo ara-pôlitika sy ny maha-olom-pirenena (ICCPR), izay mitaky ny fanafoanana ny fanamelohana ho faty. Na izany aza, hatramin'ny nanaovana sonia ny fifanarahana dia nampihatra ny fanamelohana ho faty i Taiwan tamina tranga miisa 34 , teo ambanin'ny governemanta KMT sy DPP.
Ny fomba hijeren'izay mpandresy amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny volana janoary 2020 ny momba ny fotoana apetraka ho fampitsaharana (moratorium) no fanontaniana lehibe mipetraka ankehitriny. Araka ny asehon'ny zava-niainan'ny firenen-kafa, “moratorium” maharitra iray no fomba mahomby indrindra hanafoanana ny fanamelohana ho faty, araka ny asehon'ity faritra ity miaraka amin'i Mongolia.